အချစ်ရေး Archives - Dokonetwork
စစ်ကောင်စီဥက္ကဌ ဦးခက်ထိန်နန်၏ ပူတာအို ခရီးစဉ်တွင် လုံခြုံရေးလိုက်ပါလာသည့် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင့်နဲ့ KIA တပ်ဖွဲ့တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်
August 26, 2021 dokonetwork2021 0
ပူတာအိုမြို့နယ် တန်ဂျာကျေးရွာအနီးတွင် စစ်ကောင်စီတပ်ကို KIA တိုက်ခိုက်၊ စစ်ကောင်စီတပ် သေဆုံးသူများ ပူတာအိုမြို့ – ဩဂုတ် ၂၆၊ ၂၀၂၁။ ကချင်ပြည်နယ်၊ ပူတာအိုမြို့နယ် မြစ်ကြီးနား – ပူတာအို ကားလမ်းမဘေးရှိ တန်ဂျာကျေးရွာအနီး ယနေ့ မွန်းလွဲလေးနာရီခန့်က စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နှင့် KIAတပ်ဖွဲ့တို့အကြား တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီး စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ​သေဆုံးသူများသည်ဟု သိရသည်။ ပူတာအိုဘက်မှ ဆင်းလာသော စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နှင့် KIA တို့ တန်ဂျာကျေးရွာအနီးတွင် […]
နန်းဖဲကျေးရွာ ဒေသခံများထံမှ စစ်ကောင်စီတပ်များ ပစ္စည်းနဲ့ ငွေများလုယက် (ရုပ်/သံ)
August 4, 2021 dokonetwork2021 0
နနျးဖဲကြေးရှာ ဒသေခံမြားထံမှ စဈကောငျစီတပျမြား ပစ်စညျးနဲ့ ငှမြေားလုယကျ (ရုပျ/သံ) ဧရာဝတီ၊ ဩဂုတျ ၄၊ ၂၀၂၁ စဈကောငျစီ တပျဖှဲ့ဝငျတှဟော ကယားပွညျနယျ၊ ဘောလခဲမွို့နယျ အတှငျးက နနျးဖဲကြေးရှာ ဒသေခံ တှကေို အကွမျးဖကျရိုကျနှကျကာ ပစ်စညျးတှနေဲ့ ငှသေားတှကေိုလညျး လုယူသှားတယျလို့ ကရငျနီအမြိုးသားမြား ကာကှယျရေးတပျ KNDF က ပွောပါတယျ။ ကရငျနီတပျမတျော KA ၊ ကရငျနီအမြိုးသားမြား ကာကှယျရေးတပျ KNDF ပူးပေါငျးတပျနဲ့ စဈကောငျစီ […]
အရမျးလှတဲ့ကောငျမလေးတှမှော ရညျးစားမရှိရခွငျး အကွောငျးရငျး…
July 25, 2021 dokonetwork2021 0
အရမျးလှတဲ့ကောငျမလေးတှမှော ရညျးစားမရှိရခွငျး အကွောငျးရငျး… အမှနျတော့ သိပျလှလှနျးတဲ့ ကောငျမလေးတှေ ရညျးစာ မရှိရခွငျးအကွောငျးအရငျး (၆) ခကျြ ရှိပါတယျ။ အခုဒီစာကို ဖတျနတေဲ့ ကောငျမလေးရော အဲ့လိုမြိုး အရမျးလှနလေို့မြား ရညျးစား မရတာလား? ယောကျြားလေးတှလေညျး ကိုယျကွိုကျနတေဲ့ကောငျမလေးက အရမျးလှနလေို့လကျမလြော့လိုကျပါနဲ့နျော။ အောကျမှာတော့ အရမျးလှတဲ့ကောငျမလေးတှေ ဘာလို့ရညျးစားမရှိရတာလဲ ဆိုတာကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော …။ 1. ကောငျလေးတှကေို မယုံကွညျခွငျး” သူတို့ကို ခဉျြးကပျလာတဲ့ ကောငျလေးတှကေို သူတို့ အကွှငျးမဲ့ […]
ချစ်သူက အရမ်းချစ်မှန်းသိလို့ ဆိုးနေတဲ့ကောင်မလေးတွေမှာ ဒီလိုအချက် (၅) ချက်ရှိပါတယ်
July 24, 2021 dokonetwork2021 0
မိန်းကလေးတွေဟာ ပင်ကိုယ်သဘာဝကိုက ဆိုးချင်နွဲ့ချင်၊ ချွဲချင်တဲ့သူတွေပါ။ ဒါကြောင့်မို့ပဲ ကိုယ့်ကိုဖူးဖူးမှုတ်တဲ့ ချစ်သူကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီဆိုရင် တမင်တကာ ဆိုးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချစ်စရာကောင်းအောင်ပဲ ဆိုးတာပါနော်။ တစ်ခါတလေ အဆိုးလွန်သွားလို့ ချစ်သူကို ဝမ်းနည်းအောင်၊ စိတ်ဆိုးအောင် လုပ်မိတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြိတ်ပြီး အပြစ်တင်နေတတ်တာလည်း သူတို့ပါပဲ။ ချစ်သူက ဖူးဖူးမှုတ် ချစ်မှန်းသိလို့ ဆိုးနေတဲ့ ကောင်မလေးတွေဆိုတာ ဒီလိုပါ။ (၁) ထစ်ခနဲ့ရှိ စိတ်ကောက် ချစ်သူက ဖူးဖူးမှုတ် ချစ်မှန်းသိလို့ […]
ဒီခေတ်မှာ မိန်းခလေးတစ်ယောက် မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ အချစ်ခံရဖို့ဆိုတာ ရှားသွားပြီ
မိန်းခလေးတွေ သေချာဖတ် ဒီခေတ်မှာ မိန်းခလေးတစ်ယောက် မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ အချစ်ခံရဖို့ဆိုတာ ရှားသွားပြီ။ မခူးရက်တဲ့ ပန်းလေးတစ်ပွင့်ကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ထိုင်ကြည့်နေသလို မြတ်နိုးမှုမျိုးနဲ့ ချစ်ဖို့ဆိုတာ ဟာသတစ်ပုဒ်လိုတောင် ဖြစ်နေပြီ၊ ရည်းစားထားတာ အလှထိုင်ကြည့်ပြီး ဘာလုပ်ရမှာလဲ ကိုယ်မစားလည်း သူများစားမှာပဲ ဆိုတာတွေကပါသေးတယ်။ သူများသုံးပြီးသား ညစ်နွမ်းနေတဲ့ ပုဝါလိုမျိုး အရင်လူနဲ့ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ခဲ့တာကို တန်ဖိုးကြီး ပစ္စည်းလို တန်ဖိုးထားနေလည်း အလကားပဲဆိုတဲ့ လူတွေနဲ့… ဒီလိုခေတ်ထဲမှာ မိန်းမဖြစ်ရတာ လူသုံးကုန် ပစ္စည်းတစ်ခုလိုပဲ.. ပိုက်ဆံတတ်နိုင်တဲ့သူတွေက […]